Versiondị Enterprise nke Galaxy S10 na S10e na-amalite na Spain | Gam akporosis
Samsung na-ebupụta ụdị Enterprise nke Galaxy S10 na S10e
O meela ihe karịrị ọnwa abụọ kemgbe E gosipụtara ọkwa Samsung Galaxy S10 nke Samsung. Thedị Korea ewepụtala anyị ekwentị atọ na mpaghara a. Na mbụ S10 na S10 +, nke anyị nwere kwa afọ, esonyela na Galaxy S10e, ngwaọrụ nke na-eru nso n'etiti etiti ụlọ ọrụ Korea. Thelọ ọrụ ahụ na-ekwupụta mwepụta nke ụdị ọhụrụ nke ekwentị ndị a.
Ọ bụ ihe akpọrọ Enterprise Edition, nke bu udi azumahia nke udiri ihe ndia. Ha bụ akụkụ nke atụmatụ Google a iji malite ekwentị igwe, nke anyị na-ahụ ọtụtụ ụdị nwere nsụgharị emegharịrị. Nke a bụ ihe gbasara S10 Galaxy a, nke na-ewebata ụfọdụ atụmatụ ọhụrụ maka ndị ahịa azụmaahịa.
Na nke a ọ bụ Galaxy S10 na Galaxy S10e, nke nwere ụdị a maka ụlọ ọrụ. Nkọwa nke ekwentị abụọ ahụ ka dị otu, mana agbanweela obere mgbanwe n'ụdị atụmatụ ndị ọzọ. Karịsịa nchebe ka ukwuu na nhọrọ nhazi nke onwe, na-emegharị ha na gburugburu azụmaahịa.
Otu n'ime ngwaọrụ kachasị mkpa bụ Samsung Enterprise Firmware over the Air (E-FOTA). N'ụzọ dị otú a, ekele maka ngwa ọrụ a, ngalaba IT nke ụlọ ọrụ ga-enwe ike na-achịkwa mmelite nche na akara na ekwentị mgbe niile. Ọ-enye gị ohere ka ị na-ekwentị na-echebe mgbe niile.
Echiche bụ inwe ike ịmegharị Galaxy S10 ndị a iji rụọ ọrụ na ụlọ ọrụ. Ọ na-ẹkenam ke otu Samsung Knox hazi, nke na-enye ohere ka ngwaọrụ rụọ ọrụ na ntanetị na akpaghị aka, dabere na ihe onye ọrụ ọ bụla chọrọ. Ọ na-enyekwa ohere ịmebanye ụdị nke ụlọ ọrụ na ngwaọrụ ahụ, iji hazie ya n'ụzọ a.
Versionsdị Enterprise ndị a nke Galaxy S10 adịworị ire na Spain. Companieslọ ọrụ nwere mmasị nwere ike ịkpọtụrụ Samsung iji chọpụta atụmatụ ha chọrọ, nke nwere ike ime ka ọnụahịa ahụ gbanwee. I nwere ike ịmatakwu banyere ya na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ Korea.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung na-ebupụta ụdị Enterprise nke Galaxy S10 na S10e
CameraX bụ API ọhụrụ nke Google maka ndị mmepe na - eme ka ihe dị mfe
Google na-arụkwa ọrụ na ekwentị mpịachi